Boqolaal ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka & Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ayaa waxaa saakay la geeyay xaafadda Hawlwadaag ee Galbeedka Magaalada Baledweyne – STAR FM SOMALIA
Boqolaal ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka & Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ayaa waxaa saakay la geeyay xaafadda Hawlwadaag ee Galbeedka Magaalada Baledweyne
Boqolaal ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka & Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ayaa waxaa saakay la geeyay xaafadda Hawlwadaag ee Galbeedka Magaalada Baledweyne.
Ciidamadan, ayaa waxaa la kala dhex dhigay labada beelood ee Axadii iyo Isniintiiba ku dagaalamay xaafadaasi, si aanay markale u wada dagaalamin.
Xalay waxaa Hawlwadaag laga maqlaayay rasaas ka dhaceysay laba dhinac, waxaana baqdin laga muujiyay in markale ay maanta foodda is daraan, waana midda soo dedejisay in Ciidamada Dowladda & Amisom la geeyo xaafadaasi.
Suxufiyiinta Magaalada Baledweyne, ayaa soo sheegaaya inay meesha ka baxday baqdintii laga qabay inay markale wada dagaalamaan labada beelood ee walaalaha, ee toddobaadkan ku dagaalamay Baledweyne.
Suxufiyiinta, ayaa ku soo waramaaya in shacabkii guryahooda ka barakacay la rajeynaayo inay ku soo laabtaan, maadaama ay adag tahay in dagaal dambe uu ka dhaco Hawlwadaag, illaa iyo inta ay ku sugan yihiin Ciidamada is garabsanaaya.
Wefdi ka kala socda Dowladda Somaliya iyo Maamulka Galmudug oo Talaadadii gaaray Xarunta Gobolka Hiiraan, ayaa waxaa lagu wadaa inay wada hadalo isugu keenaan beelaha ay xurguftu u dhaxeyso.